SAWIRRO-Wasiir ku-xigeen iyo xubno Garoowe loogu dhaariyey xubinimada Maxkamadda sare. – Radio Daljir
SAWIRRO-Wasiir ku-xigeen iyo xubno Garoowe loogu dhaariyey xubinimada Maxkamadda sare.
Nofeembar 27, 2016 3:02 b 0
Waxaa saaka 27 November 2016 qasriga madaxtooyada Garoowe lagu dhaariyey wasiir kuxigeenka dakhliga ee wasaarada maaliyada Dawladda Puntland mudane Maxamed Jibriil Caateeye iyo xubin ka tirsan maxkamadda sare ee Dawladda Puntland Maxamed Cumar Axmed .
Munaasabadda dhaarinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland ahna ku simaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey, masuuliyiin ka tirsan maxkamada sare ee dawlada Puntland iyo qaar kamid ah saraakiisha madaxtooyada.
Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland ahna ku simaha Madaxweynaha Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa dhaarta kadib waxa uu masuuliyiinta la dhaariyay kula dardaarmay in ay shaqadooda si daacad ah u gutaan, uguna adeegaan dalka iyo dadkoodaba, islamarkana ay ka feejignaadaan wax walba oo shaqadooda gaabis ku keenaya.
” waxaad qadeen masuuliyad weyn una baahan shaqo lixaad leh, waxaana laydinka doonayaa inaad xilkaasi siday tahay uga soo baxdaan idinkoo eegaya danaha shacabkiina iyo dalkiina, waxaana alleh idiinka baryayaa inuu idinku asturo masuuliyadda laydiin dhiibay” ayuu yiri Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey.
Dhinaca kale wasiir ku xigeenka dakhliga ee wasaarada maaliyada Puntland Mudane Maxamed Jibriil Cateeye iyo masuulkan ka tirsan maxkamadda sare ee Dawladda Puntland Maxamed Cumar Axmed ayaa waxay ballan ku qaadeen kuna dhaarteen inay ugu adeegi donaan xilalkan loo igmaday bulshadooda isla markaana ay ka fogaan doonan wax walba oo shaqadooda hakad gelin kara.
XAFIISKA WARFAAFINTA, WACYI-GELINTA, HIDAHA IYO DHAQANKA EE MADAXTOOYADA DAWLADDA PUNTLAND.
AKHRI-Puntland oo soo saartay magacyada Soomaalida ku xir xiran India
DHEGEYSO-Howlgallo lagu beegsanayo dadka ajaaniibta ah oo kasocda Zambia.